येशूको सुसमाचार | Gospel in Nepali
You are here: Home / येशूको सुसमाचार | Gospel in Nepaliयेशूको सुसमाचार | Gospel in Nepali
सुरूमा ईश्‍वरले स्वर्ग र धर्ती बनाउनु भयो।
पापीहरूका लागि ईश्‍वरले यश छोड्नु हुनेछ।
प्रभूले तिनीहरूलाई उत्तर दिनु भयो “ म तिमीहरूलाई निश्‍चित गराउछु जसले पापको पक्ष लिन्छ उ पापको दास हुन्छ।”
ईश्‍वरले हामीलाई बनाउनु भयो तर हामीले ईश्‍वरलाई चिन्न सकेका छैनौ। किनभने हामी हाम्रो पापको कारणले ईश्‍वरदेखि टाडा भएकाछौं। ईश्‍वरको कुनै अर्थ र अभिप्राय हुँदैन। आध्यात्मिक एवं भौतिक दुवै रूपमा पापको परिणामले हाम्रो मृत्यु हुन सक्छ। आध्यात्मिक मृत्युको अर्थ ईश्‍वरबाट टाडा हुनु हो भने भौतिक मृत्युको अभिप्राय नाश्‍वर शरीरबाट मुक्त हुनु हो। यदि हाम्रो मृत्यु हाम्रो पापको कारणले हुन्छ भने हामी ईश्‍वरबाट अलग्गै रहन्छौ र हाम्रो अन्त नर्कमा गएर तुरिन्छ। हामी हाम्रो पापहरूबाट आफैलाई कसरी बँचाउन सक्छौ र ईश्‍वर भएकोमा फर्कन सक्छौ ? हामी आफैले हाम्रो रक्षा गर्न सक्दैनौ किनभने कुनै पनि पापपूर्ण व्यक्तिबाट आफैलाई रक्षा गर्न सम्भव छैन। न कसैले आएर हामीलाई बँचाउने छ। किनभने सबै जना पापी छन्। हामीलाई हाम्रो पापहरूबाट जोगाउन पापरहित व्यक्तिको खाँचो छ। पापरहित व्यक्तिलेमात्र हामीलाई बँचाउन सक्छ। पापी नै पापी भएको यस पापपूर्ण संसारमा पापरहित व्यक्ति कसरी खोज्ने ?
संघर्षमा पापको मृत्यु हुन्छ, तर ईश्‍वरको उपहार हाम्रो आत्ममा ईश्‍वरको रूपमा सदैव रहन्छ।
प्रभूले यस धरतीलाई धेरै माया गर्नु हुन्छ, यसैले उहाँले आफ्नो अति प्रिय पुत्र पठाउनु भयो, जसले उहाँमाथि विश्‍वास गर्छ उसको कहिँले नाश हुँदैन, उसको कल्याण हुन्छ।
अक्षत योनि त नानीमा मात्र हुन्छ, जुन छोरोले झेल्दछ अनि त्यसलाई इमान्यूल भनिएको छ, जुन ‘ईश्‍वरसँग’-मा अनुदित छ।
अनि उहाँले तिनीहरूलाई भन्नु भयो तिमी तलबाट आएका हौं, म माथीबाट। तिमी यस धरतीका हौं, म यस धरतीको होइन।
त्यसपछि स्वर्गबाट आवाज आयो “तिमी मेरो आत्मीय पुत्र हौ, म उसँग खुशी छु।”
त्यसैले यदि पुत्रले तिमीलाई मुक्त बनाँउछ भने यथार्थमा तिमी मुक्त हुनेछौं।
प्रभूले उत्तर दिनुभयो र भन्नुभयो “निश्‍चिन्त हुव, म तिमीलाई भनिरहेकोछु, अन्तमा कोही फेरि जन्मनेछ, उसले ईश्‍वरको साम्राज्य देख्‍नेछैन।”
तर धेरैले उहाँलाई स्वीकार गर्नेछ, जसले उहाँको नाममा विश्‍वास गर्छ उसलाई ईश्‍वरको पुत्र प्राप्त हुनेछ।
ईश्‍वर, जसले हामीलाई बनाउनु भयो, हामीलाई धेरै माया गर्नु हुन्छ उहाँले नै यसको समाधान गर्नु हुनेछ। यस महत् कार्यको लागि ईश्‍वरले आफ्नो पुत्र जिजसलाई यहाँ पठाँउनु भयो। जो हाम्रो पापको लागि मर्नु भयो। जिजस पापरहित हुनुहुन्थ्यो किनभने उहाँ यस संसारबाट आउनु भएको थिएन अनि उहाँमा कुनै पाप र प्रलोभन पनि थिएन। उहाँको जीवन स्वार्गमा ईश्‍वरसँग छ। जिजसले हाम्रो सबै पापहरू लिनुभयो अनि हाम्रो पापको लागि क्रसमा झुण्डिनु भयो। उहाँ हाम्रो रक्षा गर्न सक्षम हुनुभयो किनभने उहाँ पापी हुनु हुन्थेन। क्रसमा टांगिएर मर्नु पछाडि जिजसको अभिप्राय हामीलाई हाम्रो पापबाट मुक्ति दिलाउनु र ईश्‍वरसँग टुँटेको हाम्रो सम्बन्ध पुन: जोड्नु थियो। ईश्‍वरीय शक्तिद्वारा आध्यात्मिक मृत्युपछि हामी पुन: जीवित भयौ। यस नयाँ सम्बन्धलाई पुन: जीवन भनिन्छ। यस पुन: जीवनले हामीलाई हाम्रो सृष्टि, निर्माण अनि जीवनको साँचो अर्थ र जीवनको अभिप्राय दियो।
जीजसले उसलाई भन्नु भयो “ म यो जीवनमा पुर्जीवित भएको हुँ, जसले मलाई विश्‍वास गर्छ, उ कहिले मर्दैन, जीवित रहन्छ।
क्राइस्टलाई बुझ्नु मृत्युबाटमाथि उठ्नु हो, मृत्यु असम्भव छ, मृत्युको उमाथि कुनै प्रभुत्त्व हुँदैन।
जो ईश्‍वरसँग जिँउदछ मृत्युको पीडालाई जित्दछ, किनभने यी सबै गर्नु उसलाई सम्भव छैन।
अन्तमा क्राइस्ट मर्नु भयो अनि गुलाबको रूपमा फेरि जिँउदो हुनुभयो, यसर्थ मृत्यु र जीवन दुवैमा उहाँ ईश्‍वरको रूपमा बस्नुभयो।
कसैले भन्यो “ मानव ग्यालेली, आँखा उठाएर माथि स्वर्गमा के हेर्छौ? समान रूपले जिजसले उठाएर तिमीलाई स्वर्गमा लगेको थियो, उहाँलाई भेट्न स्वर्गमा जान राम्रो व्यवहार देखाउँ।
हाम्रो पापको निम्ति जिजसले दिनु भएको मृत्युको त्याग स्वार्गमा ईश्‍वरले स्वीकार गरेको साक्ष्य के थियो ? यसको साक्ष्य जिजस पुन: मृत्युबाट बौरी उठ्नु भयो। उहाँ फेरि मृत्युबाट बौरी उठेर आउनु हुनेछ। उहाँ जीवित हुनुहुन्छ, यसैले हामी पनि जीउन सक्छौ। उहाँको जीवनले हामीलाई जीवन दिनुभयो। उहाँ फेरि आउनु हुनेछ, उहाँ आज पनि जीवित हुनुहुन्छ।
निश्‍चित हुव म तपाईँलाई भन्छु, उ जसले मेरो कुरा सुन्छ अनि उहाँमाथि विश्‍वास गर्छ, जसले मलाई जीवनको सन्देश पठाउनु भएकोछ अनि कहिले निर्णय दिन आउनु हुँदैन तर जीवन दिनुहुन्छ।
म ढोका हूँ। मद्वारा जो कोही पनि त्यहाँ प्रवेश गर्छ, उ सुरक्षित रहन्छ, सहजै भित्र जान र निक्लन सक्छ अनि यसको चरण खोजी निकाल।
जिजसले उसलाई भन्नु भयो “म सत्य र जीवनसम्म पुग्ने बाटो हूँ। सृष्टिकर्ता बाहेक कोही पनि यहाँ आउन सक्दैनन्।
त्यसैले तिमी आफ्नो पापहरूको कारणले मर्नेछौं, यदि तिमी ममा विश्‍वास गर्दैनौ भने आफ्नो पापको कारणले मर्नेछौ।
त्यहाँ कुनै मुक्तिको मार्ग छैन, स्वार्गमा कुनै नाम छैन, जहाँ उ सुरक्षित रहन सक्छ।
जसले “ ईश्‍वरको नाम पुकार्दछ उ सुरक्षित रहन्छ।”
बाइबल भन्दछ “जसले उहाँमाथि विश्‍वास गर्छ उ कहिले पनि लज्जाको भागीदार हुँदैन।”
ईश्‍वरसित कुनै पक्षपात हुँदैन।
यहाँसम्म कि ईश्‍वर कृपालु हुनुहुन्छ, जिजस क्राइस्टको विश्‍वासको माध्ययमबाट, सबै जसले उहाँमाथि विश्‍वास गर्छ, त्यहाँ कुनै भिन्नता छैन।
सच्चा मनले प्रभू जिजसमा विश्‍वास भएको स्वीकार गर्नु भयो भने मृत्युबाट प्रभू आउनुहुनेछ, तपाईँ सुरक्षित हुनुहुनेछ।
हामी हाम्रो पापबाट मुक्त भएर नयाँ जीवन कसरी प्राप्त गर्न सक्छौ ? जिजसलाई आफ्नो ईश्‍वर र रक्षक मानेर। यदि हामीले हाम्रो पापमा पश्‍चताप गरेर ईश्‍वरसँग क्षमा माँग्यौ भने ईश्‍वरले हामीलाई क्षमा गर्नु हुनेछ। जिजस ईश्‍वरको पुत्र हुनुहुन्थ्यो जो यस संसारमा आउनु भयो र हाम्रो पापको लागि मर्नु भयो। यस संसारमा जसले उहाँलाई विश्‍वास गर्छ उहाँले उसलाई क्षमा गर्नु हुनेछ अनि पापबाट मुक्त गर्नु हुनेछ र ईश्‍वरबाट नयाँ जीवनदान दिनुहुनेछ। ईश्‍वरले कुनै पक्षपात देखाउनु हुँदैन। उहाँ कहीँबाट पनि प्रभावित हुनु हुन्न- जहाँ हामी बस्छौ, जुन भाषा बोल्छौ, धनी वा गरीब, पुरूष वा महिला, जवान वा वृद्ध वा कुनै पनि भौतिक भिन्नता। जसले जिजसमा विश्‍वास गर्छ र उहाँलाई स्वीकार गर्छ उहाँले रक्षा गर्नु हुनेछ। यदि तपाईँ जिजसमा विश्‍वास गर्नु हुन्छ भने निम्नलिखित पार्थना गर्नुहोस्-
हे स्वार्गको ईश्‍वर धन्यवाद, तपाईँले आफ्नो पुत्र जिजस पठाउनु भयो, जो मेरो लागि मर्नु भयो र मलाई पापमुक्त गर्नुभयो अनि स्वार्गको बाटो देखाउनु भयो। मलाई मेरो पापदेखि पश्‍चताप छ र मलाई क्षमा गरिदिनुहोस्। म जिजसप्रति विश्‍वास गर्छु र मेरो रक्षक उहाँलाई स्वीकार गर्छु। तपाईँले दिनु भएको यो नयाँ जीवन म खुशीसँग बिताउन चाहन्छु, यसको नम्ति मलाई मार्ग निर्देशन गर्नुहोस्। – आमेन
यदि तपाईँले माथिको पार्थना गर्नु भयो भने ईश्‍वरसँग गिर्जामा जाने बाटो पाउनु हुनेछ। दैनिक रूपमा ईश्‍वरको पार्थना गर्नु भयो भने ईश्‍वरले तपाईँसँग बात गर्नु हुनेछ। ईश्‍वरको आवाज सुन्नु हुनेछ। ईश्‍वरले तपाईँलाई मार्गदर्शन गर्नुहुनेछ। उहाँले तपाईँलाई माया गर्नु हुन्छ अनि तपाईँको रक्षा गर्नुहुनेछ। उहाँमाथि विश्‍वास गर्नुहोस्। जसले उहाँमाथि विश्‍वास गर्छ उसलाई उहाँले कहिले निराश गर्नु हुन्न। ईश्‍वर असल हुनुहुन्छ। उहाँमाथि विश्‍वास गर्नुहोस्। तपाईँ उहाँमाथि आश्रित हुनुहोस्। तपाईँको आवश्यक्ताहरू उहाँको अघि ल्याउनुहोस्। उहाँले तपाईँको रक्षा गर्नुहुनेछ अनि तपाईँलाई आर्शिवाद दिनुहुनेछ। ईश्‍वर भन्नु हुन्छ- “म तिमीलाई कहिले छोडदिन न त त्याग गर्छु।” ईश्‍वरमाथि विश्‍वास राख्‍नुहोस्। जिजसबाट आर्शिवाद पाउनुहोस्।
जोनको सुरूको किताबदेखि बाइबल नियमित पढ्नुहोस्। इन्टरनेटमा अधिक आवश्यक्ताको लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस्।